Caalamka, 03 July 2019
Arbaco 3 July 2019
Iran oo sheegtay in 'cadowgeeda' uu ka baqay dagaal
Taliyaha ciidamada Ilaalada Kacaanka Iran ayaa sheegay in “cadowgooda” ay ka baqeen suurta-galnimada dagaal ay la galaan Iran, taa beddelkeedna ay diiradda saarayaan dagaal dhaqaale, sida ay werisay wakaaladda wararka dalkaas ee Fars.
Itoobiyaanka Israel oo dibad-baxyo dhigaya
Israel ayaa wajahaysa dibad-baxyo xooggan oo looga soo horjeedo sarkaal boolis oo isaga oo aan shaqo ku jirin dilay wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan bulshada Itoobiyaanka Israel.
Iran oo dilaysa dad u 'jaajuusay' Mareykanka
Dacwad oogayaasha Iran ayaa dil toogasho u raadinaya dhowr qof oo ku jira militariga iyo hay’adaha nukliyeerka kuwaas oo sanadii tagtay loo xiray tuhunno la xiriira inay u jaajuuseen Mareykanka, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Erdogan oo diiday 'heshiiska qarniga'
Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay tahay “wax aan xitaa laga hadli karin” in Tukriga uu taageero qorshaha dhaqaalaha ee Mareykanka uu ugu talo-galay Falastiin.
Khalifa Haftar oo Turkiga u Hanjabay
General Khalifa Haftar oo maleeshiyaad daacad u ah ay ka dagaallamaan Libya ayaa ku goodiyay inuu weerari doono danaha Turkiga ee Libya, ka dib markii dib u dhac weyn uu kala kulmay dadaalkii uugu jiray inuu ku qabsado caasimadda dalkaasi ee Tripoli.
Afghanistan: Taliban oo weerar ku dishay ciidamo badan
Maleeshiyada ururka Talibaan ee dalka Afghanistan ayaa weerar ku dilay daraasin ka tirsan ciidanka dowladda, iyadoo Ururkaasi uu bilaabayo wareega cusub oo ah wadaxaajoodyo uu kula jiro dalkan Mareykanka.
Nin lala xiriirinayo weerarkii Paris ee 2015 oo la qabtay
Mas’uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay inay xireen nin Bosnian ah oo lala xiriirinayo weeraradii argagixiso ee 2015 ka dhacay magaalada Paris ayna u masaafurin doonaan dalka Belgium.
Erdogan: Cidna fasax uga qaadan meyno danteena
Madaxweynaha Turkiga, Reccep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in Turkey ay bisha July heli doonto habka difaaca gantaalaha S-400 ee Ruushka uu sameeyo, taasi oo xiisad ka dhex abuurtay dalkiisa iyo Mareykanka oo ay ka wada tirsan yihiin NATO.
Mucaaradka oo ku guuleystay doorashadii Istanbul
Xisbiga Erdogan oo lagu bahdilay doorashadii Istanbul
Xisbiga madaxweyne Reccep Tayyip Erdogan ee AKP, ayaa waxaa asiibay guul-darro xooggan ayada oo lagu bahdilay doorashadii duqa magalaada Istanbul ee shalay dhacada, oo mucaaadka ay ku guuleysteen.